Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: faharetana ho feno ny fahendrena | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: faharetana ho feno ny fahendrena
Na inona na inona ny filazana ny tsy fahombiazan’ny fanomanana an’iny fifidianana iny, nampiseho fahendrena ny vahoaka. Arak’izany, tsy nisy korontana nitranga. Azo heverina fa raha tsy misy ny mpitarika fanakorontanana dia hitohy am-pahatoniana ny filaminana eto amin’ny fiarahamonina eo am-piandrasana ny valiny. Angamba efa misy mahita taratra ny mety ho vokatry ny fifidianana na ireo maneho ny finoany handresy na ireo efa ritra fanantenana ka velona ahiahy mikasika ny tarehimarika mitory ny tsy fahombiazany. Manara-maso hatrany ny mponina. Ny ankamaron’ny olona tsy mientanentana firy iaraha-mahafantatra fa mbola maro ny ambaratonga diavin’ny vokatra mialoha ny fanambarana azy ho vokatra manan-kery. Na izany aza, efa voasoratra any ny safidim-bahoaka, tsy misy mahafantatra ny tena vokatra an-kapobeny aza ka mbola azo heverina ny fisehon’ny vokatra tsy nampoizina, tsy manana anjara intsony ny fanantenana amin’ny fitrangana fahagagana. Tsy maintsy mandeha hatrany moa ny siosion-dresaka fampielezana ny fomba fanodikodinana ny vokatra. Mipetraka arak’izay anefa ny fanontaniana : raha fantatra ny fisian’izany fomba ratsy izany, ahoana no tsy napetraka hatramin’izay ny fepetra hanakanana ny fanaovana an’izany ? Hery samy hafa anefa no nifandimby teo amin’ny fitondrana. Nifandimby koa ve amin’ny fiarovana an’ireo faharatsiana ireo ahafahana mampiasa azy ho an’ny tombotsoa manokan’ny tena?
Menatra ihany raha mihaino ny filazam-baovao avy any ivelany na mamaky ny gazety any. Rehefa miresaka ny fifidianana eto Madagasikara izy ireny dia manitatra any amin’izay tsy izy. Toy ny hoe anisan’ny voalohany eran-tany ny vahoaka malagasy amin’ny tsy fahazakana ny safidin’ny maro an’isa voalazan’ny vokatra nangonina tao anatin’ny vatam-pifidianana manerana ny Nosy.
Ny fomba fametrahana ny fanontaniana no mety avy hatrany dia mampivilana ny valiny ka ny vahoaka indray no omena tsiny. Ahoana moa ny vahoaka no voasarika hihevitra isak’izay mandeha fa voafitaka ny safidiny ? Ireo mpanara-maso avy any ivelany dia tsy afaka manadihady ohatra momba ny fisian’ny fahadisoana ao anatin’ny lisim-pifidianana na tsia. Lasa mitsabaka ao anatin’ny vilanim-pirenena izy. Matetika aza efa manirikiry ny fisehoany ho lava-maso tafahoatra. Ny tontolon’ny fifidianana dia manomboka any amin’ny fanapahan-kevitra, mandalo amin’ny fiomanana sy fanomanana, mandritra ny andro fandatsaham-bato, mandram-pahatonga any amin’ny fanambarana ny vokatra sy ny ampitson’io fanambarana io. Raha izany no dinihina, tsy mbola tafita amin’izao fotoana izao, fa mila faharetana am-pilaminana.